मेरो खुशी : मेडल हात पार्दा ... - Goraksha Online
मेरो खुशी : मेडल हात पार्दा …
त्यो समयमा छोरीहरुलाई धेरै पढाउनु हुन्न भन्ने मान्यता थियो । उमेरले म भर्खर १४ वर्षको थिएँ । त्यसमा पनि खेलकुद क्षेत्रमा न्यून मात्रामा महिलाको सहभागिता हुन्थ्यो । छोरीहरु खेलकुदमा लागेपछि बिग्रिन्छन्m त्यतातिर लगाउनु हुन्न, पढाउनु पनि हुन्न भन्ने चलन थियो । यस्ता गलत कुराले गाउँघरमा सबैको सोचाइमा भ्रम सिर्जना गरिएको थियो ।
तर मेरो आमाबुबाले भने हामी बहिनीहरुलाई त्यतिबेलै पढानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो र हामीले पढ्यौँ । ‘त्यो सँगसँगै म खेलक्षेत्रमा पनि लागेँ’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ निवासी सावित्रा गुरुङले भनिन् । तुलसीपुर–५ कि वडा सदस्य तथा हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी गुरुङले आफ्नो पहिलो खुशी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा राप्ती अञ्चलबाट तेक्वान्दो प्रतियागितामा भाग लिएर मेडल हात पर्दाको क्षण भएको सुनाइन् ।
‘मेरो पहिलो खुशी १४ वर्षको उमेरमै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएर तेस्रो मेडल हात पार्दाको हो, जीवनका उकालीओरालीमा अन्य धेरै खुशीहरु छन् तर मैले त्यसैलाई पहिलो खुशीको रुपमा सम्झन्छु’–उनले भनिन् ।
उनका अनुसार मेडल जितेर आएपछि तुलसीपुरमा तत्कालीन अञ्चलाधीश जगदीस खड्काले सम्मान गरेको थिए । ‘मलाई त्यो दिन निकै खुशी लागेको थियो, जुन दिन राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेर तुलसीपुरमा सम्मान पाएका थियौँ’ उनले भनिन् ।
उनले राप्ती अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने टिमले ३ वटा मेडल हात पारेको सम्झिइन् । ‘त्यो दिन म निकै खुशी भएको थिएँ, त्यो मेडल लगाएर तुलसीपुरबाट दमारगाउँ हिडेर गएको थाहै पाइन’ –गुरुङले भनिन्–‘ घरमा जाँदा पनि परिवारले धन्यवाद दिनुभएको थियो ।’ त्यस्तै गुरुङले अर्को खुशी भारत्तोलनमा गोल्डमेडल हात पार्दा लागेको सुनाइन् ।
‘२०५६ सालमा राष्ट्रिय भारोत्तलन खेलकुद प्रतियोगितामा गोल्ड–मेडल हात पार्दा पनि मलाई खुशी मिलेको थियो’ –उनले भनिन् । गुरुङले तीन पटकसम्म राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आफूले गोल्ड मेडल हात पार्न सफल भएको बताइन् ।
‘दाङको नाम राष्ट्रभरि चिनाउन पाउँदा मलाई त्यतिबेला गर्व लागेको थियो, जुनबेला मैले गोल्ड मेडलदेखि पहिलो पटक १४ वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएँ’ उनले भनिन् । त्यस्तै उनले अर्को खुशी लामो समयपछि २०७५ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जित हासिल गर्दाको सुनाइन् ।
खेलकुद सँगसँगै राजनीतिक र विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक कार्य गर्दै आएकी गुरुङले नेपाली कांग्रेसले सदस्यमा टिकट दिएको र आफूले चुनाव जितेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा खुशी लागेको सुनाइन् । ‘मलाई जित्दा त्यति खुशी भने लागिन तर आजभोलि दिनरात जनताको सेवा गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ’ –गुरुङले भनिन् ।
उनीसँग खुशीका पलहरु खोतल्दै गर्दा पनि उनी जनताको सेवामा तल्लीन थिइन् । ‘अरुले फोन आउँदा झन्झट मान्छन होला मलाई मजा लाग्छ’– उनी हाँस्दै भनिन् । सधँै हँसिलो उमेर ढल्किन लाग्दा पनि जाँगरिलो, जोशिलो र शाहसिली गुरुङले अर्को खुशी पार्टीले दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सदस्यको जिम्मेवारी दिएर पठाएकोमा सुनाइन् ।
उनले खेलकुद विकास समितिको सदस्यमा ४ वर्षका लागि आफूलाई पठाएको र आफूहरुकै पालामा दाङमा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गर्न पाउँदा जीवनै खुसी र गर्वको अनुभूति भएको सुनाइन् । ‘दाङमा २०७६ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने पनि अवसर मिल्यो, रङ्गशाला निर्माण पनि भयो, त्यो भन्दा ठुलो के हुन्छ र तपाईंहरु आफै भन्नुस्’–उनले भनिन् ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत रहेकी गुरुङले पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रही काम गर्ने अवसर पाएकोमा आफूलाई निकै खुशी लागेको सुनाइन् । त्यस्तै तुलसीपुर–५ स्थित न्युरोड टोल विकास संस्थाकी पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी गुरुङले विभिन्न क्षेत्रमा दुःख पाएका महिला दिदबहिनीहरुलाई सहयोग गरेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।
‘यो नै भन्ने एकीन छैन, धेरै महिला दिदीबहिनीहरुलाई मैले सहयोग गरेको छु, उहाँहरुको जीवनलाई सफल पार्न हौसला समेत दिने गरेको छु’ उनले भनिन् । तुलसीपुर–३ दमारगाउँमा जन्मिएकी गुरुङले आफूहरु सानो हुँदा हलो ज्योत्दा निकै खुशी लाग्ने गरेको सुनाइन् । बाल्यकालको सम्झना गर्दै उनले भनिन्–‘हाम्रो घरमा दाजुभाइ थिएनन्, हामी तीन बहिनीले खेतीपाती आफै गर्नुपर्ने अवस्था थियो, खेतबारी जोत्दा निकै आनन्द लाग्ने गरेको थियो ।’
गुरुङले हाफपाइन्ट लगाएर पुरुषसरह नै काम गर्दा निकै रमाइलो लाग्ने गरेको सुनाइन् । उनले त्यतिबेला छोरीले हलो जोत्नु हुन्न भन्ने परम्परा भए पनि आफूहरुले भने सधैँ हलो जोत्नेगरेको बताइन् । ‘त्यो समयमा सञ्चार माध्यम थिइनन्, आजभोलिजस्तो भए हामीले हलो ज्योतेका फोटोहरु भाइरल हुन्थ्यो होला’–उनले भनिन् ।
तुलसीपुर–५ न्यूरोड निवासी सावित्रा गुरुङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ की वडासदस्य, राष्ट्रिय खेलाडीका साथै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ हुन् ।
सडकको काम हामीले मात्रै होइन, अन्य निकायले पनि गर्छन् : डिभिजन प्रमुख शाक्य
बिप्लवको नाममा चन्दा माग्ने दुई जना पक्राउ